Ithegi: ukuqonda komthengi | Martech Zone
Ithegi: ukuqonda komthengi
Ukwenza imali ngokupapashwa akululanga njengoko kubonakala. Jonga ngononophelo kuyo nayiphi na impapasho ephambili kwaye uyakufumana isiqingatha seshumi lezinto ezicaphukisayo ezicela abafundi ukuba bemke. Kwaye bahlala bekwenza. Nangona kunjalo, ukwenza imali bububi obuyimfuneko. Ndiyayithanda okanye andiyithandi, kufuneka ndihlawule amatyala ajikeleze apha ngenxa yoko ndifuna ukulinganisa inkxaso-mali kunye neentengiso ngononophelo. Indawo enye esifuna ukuphucula ukwenziwa kwemali ibikuyo